Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Mmadụ anọ nwụrụ, 19 merụrụ ahụ na oke mmiri ozuzo Istanbul
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Turkey na -agbasa News
Istanbul na-alụ ọgụ maka ihu igwe siri ike kemgbe mmalite nke Mọnde, yana mgbasa ozi ọha na eze jupụtara na vidiyo na-atụ egwu nke elu ụlọ ndị ifufe na-akpụ, ụlọ ndị mebiri emebi, osisi dara ada, ụgbọ ala kwaturu, na irighiri ihe na-efe efe.
Dị ka nkwupụta ụlọ ọrụ Gọvanọ Istanbul si kwuo, oke mmiri ozuzo dara n'obodo Turkey na Mọnde, gbuo mmadụ anọ ma merụọ ahụ dịkarịa ala iri na itoolu.
"Anyị na-ekpe ekpere maka ebere Chineke maka ndị nwụrụ anwụ, na-ezigara ndị ikwu ha nkasi obi, na-achọ mgbake ngwa ngwa maka ndị merụrụ ahụ," nkwupụta ahụ kwuru.
Otu onye mba ọzọ na ụmụ amaala Turkey atọ anwụọla n'oké ifufe, ebe atọ n'ime mmadụ iri na itoolu merụrụ ahụ na-anọ n'ụlọ ọgwụ n'ọnọdụ siri ike, ndị ọchịchị obodo kwupụtara.
Istanbul na-alụ ọgụ ihu igwe siri ike kemgbe mmalite nke Mọnde, na mgbasa ozi ọha na eze jupụtara na vidiyo na-atụ egwu nke elu ụlọ ndị ifufe na-akpụ, ụlọ ndị mebiri emebi, osisi dara ada, ụgbọ ala kwaturu, na ihe mkpofu na-efe efe.
E mechiri ụzọ Bosphorus maka okporo ụzọ ụgbọ mmiri yana kwụsịtụrụ ọrụ ụgbọ mmiri.
Oké ifufe a kpalitekwara ịkagbu ọtụtụ ụgbọ elu ga-eji Istanbul.
Ụgbọ elu ndị a enweghị ike ịdaba na Ọdụ ụgbọ elu Istanbul, ma a na-ebugharị ya na Ankara na Izmir.
Akụkọ banyere mmebi esiwokwa na mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ, na ịdọ aka ná ntị oké ifufe ka dị maka Tuesday.